Ihe anyị tụrụ anya na WWDC 2015 | Akụkọ akụrụngwa
Pablo Ortega | | Apple, Ihe omume, General
Ngụkọta ọnụ amalitela. Mọnde na-esote, June 8, ụlọ nzukọ mgbakọ Moscone Center dị na San Francisco ga-anabata ndị ọbịa Nzukọ Ndị Mmepe Worldwa 2015. Nzukọ onye Mmepụta kwa afọ, nke Apple, na otu n’ime ndị kasị ewu ewu na nkà na ụzụ ụwa. Inweta tiketi maka WWDC 2015 bụ ọrụ dị mgbagwoju anya: nke mbụ ị ga-abanye aha gị na eserese ma, ọ bụrụ na ọ bụ nke a họọrọ, ị ga-enwe ike ịkwụ ụgwọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ dollar 1.600 nke ọnụ ụzọ mbata ahụ.
The WWDC aghọwo ihe omume ahụ metụtara sọftụwia. N'afọ a Apple ga-ekwuwapụta - iOS 9, ihe dị ọhụrụ na OS X, mana a ga-enwe ihe ịtụnanya na mpaghara ndị ọzọ. N'adịghị ka ndị ọzọ mbipụta, oge a na ntapu nwere obere, ma anyị nwere ike inwe echiche nke ihe Apple na-akwadebe maka afọ gara aga. Nke a bụ ihe anyị na-atụ anya WWDC 2015 na ngalaba ọ bụla.
4 Egwuregwu Apple
5 Apple si gụgharia telivishọn ọrụ
N'afọ gara aga, Apple webatara iOS 8, sistemụ arụmọrụ nke weere ezigbo ụzọ iji hazie ngwaọrụ anyị. Companylọ ọrụ mechara kwere ka anyị zụta ahụigodo nke ndị ọzọ mepụtara ma gbakwunye ma ọ bụ wepu wijetị site na ebe ngosi anyị. N'echiche a, Apple sitere n'ike mmụọ nsọ nke isi sistemụ arụmọrụ: Android. Afọ a anyị na-atụ anya na imeghe onwe nke onwe na-aga n'ihu. Anyị nwere ike ịchọta ihe ịtụnanya na nzukọ nke akara ngosi ma ọ bụ mgbe ị na-achịkwa interface, mana ruo ugbu a enweghị nnukwu nkọwapụta na nke a.
N'aka nke ọzọ, na iOS 8 Apple pụtara "HomeKit", ngwa nke chọrọ ịghọ ụlọ nwere ọgụgụ isi nke ụlọ anyị. Ndị mmepe na ndị nrụpụta ngwa nwere ike iji "HomeKit" nyere ndị ọrụ ike. HomeKit ga-ekwe ka anyị chịkwaa akpaaka ụlọ site na otu ngwa: ịwelite ma wedata isi, ịlele igwefoto ụlọ, ịgbanye ọkụ ma gbanye, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ndi otu n'ime ihe ndị kasị atụ anya ngwaọrụ nke iOS 8, ma ọ dị mwute ikwu na Apple anaghị arụ ọrụ ya. "HomeKit" nọ "na ezigbo ụra ụra" n'ime iPhones anyị kemgbe afọ gara aga ma anyị amaghị ihe kpatara ya. N'ikpeazụ, iOS 9 ga-eburu baton ahụ ma bụrụ sistemụ arụmọrụ nke na-enye anyị ohere ịchịkwa ihe ndị dị n'ụlọ. N'ime ọnwa ole na ole gara aga, Apple na ọtụtụ ụlọ ọrụ ngwa ngwa ekwupụtala na ha dị njikere ịmalite ngwaahịa ndị kwekọrọ na HomeKit. Oge ahụ abịawo ma anyị nwere ike ịtụ anya ọtụtụ ihe ịtụnanya na nke a, ọ bụghị naanị na iOS 9, mana a ga-enwe ngalaba ndị ọzọ ga-erigbu ikike nke HomeKit, dịka ị ga-ahụ ma emechaa.
Ihe akaebe ọzọ anyị nwere, site na nkwụsịtụ n'aka ndị ọrụ Apple, na-eduga anyị na ukara Maps ngwa. Nke a bụ otu nnukwu "nsogbu" nke Apple na iOS 6: ikpo okwu, nke amụrụ iji dochie Google Maps, ebikọghị na atụmanya na mmiri ozuzo nke nkatọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere. Apple bịara nrụgide dị otú ahụ nke na a manyere Tim Cook ịbịanye aka n'akwụkwọ ozi ọha nke mgbaghara na-atụ aro ndị ọzọ na-ama aka. Maapu Apple abawanyela nke ukwuu na afọ ndị na-adịbeghị anya, na-enye ụzọ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi karị, mana ọ ka na ọkwa Google Maps. N'oge a, Apple Maps egosighi anyị okporo ụzọ ma ọ bụ ugbo ọha, ma nke ikpeazu a nwere ike gbanwee site na iOS 9, n'oge nke Apple ga - amalite iwebata ozi maka obodo buru ibu dịka New York, London, Berlin na Paris.
N'aka nke ọzọ, a na-atụ anya ịgbakwunye mmelite ngwanrọ dị mkpa na iPad. Mbadamba Apple ejirila ọdịda ahịa daa n'afọ gara aga ma ọ dịghị ihe ọ bụla yiri ka ọ ga-enwe ike ịkwụsị ya. A abysmal iche na iPhone 6 Plus ga-abụ azịza ya. iOS 9 nwere ike iwebata ezigbo ọrụ, nke anyị nwere ike imeghe ma jikwaa windo abụọ, yana ngwa abụọ dị iche iche, n'otu oge. Ọ gaghị adị njọ ma ọ bụrụ na, n'ikpeazụ, iOS 9 ghọrọ sistemụ arụmọrụ nke na-enye anyị ohere ịmalite oge dị iche iche na iPad. Ọ ga-abata na gburugburu ebe obibi na ọrụ (na onye ọrụ ọ bụla nwere ozi ha nwere, yana paswọọdụ).
N'afọ gara aga, ugbu a, anyị amatala na a ga-akpọ OS X Yosemite, dị ka ogige ogige Californian. Afọ abụọ gara aga Apple malitere iji aha nke ọnọdụ dị mkpa na steeti ọlaedo maka nsụgharị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ maka Mac. N'oge a, na ụbọchị abụọ mgbe ihe omume ahụ gasịrị, anyị amabeghị ihe ga-abụ ahọrọ aha otutu.
iOS 9 ga - abụ sistemụ arụmọrụ lekwasịrị anya iji melite nkwụsi ike, dịka anyị mụtara, na OS X ga-agbaso usoro ndị a. Anyị amaghị ihe isi akụkọ banyere OS ga-abụ oge a, agbanyeghị na anyị nwere olile anya na anyị ga-achọtakwa ụfọdụ ọkwa nke mwekota na HomeKit na otu mmezi etinyere na Apple Maps mmemme. Ọhụrụ a nke OS X ga-abịa na-eji na a mmelite na nnwere onwe nke MacBook, MacBook Air na MacBook Pro ma nwee olile anya na nsogbu ndị metụtara njikọ Wi-Fi, otu n'ime ọrụ Apple na-echere, ga-edozi ozugbo.
N'ime ogbako ikpeazụ ya, Apple belata ọnụahịa Apple TV na-emebu site na 99 euro ruo 79 euro, nke kpatara asịrị banyere ọgbọ ọhụrụ. Na New Apple TV ga-ata ahụhụ otu n'ime nnukwu ihu na-asacha ruo ụbọchị. Na mgbakwunye na esonyere ya na ngwaike dị ike, setịpụrụ ga-eweta atụmatụ ọhụrụ, nke dị gịrịgịrị na ọkụ (gụnyere onye nchịkwa), tinyere ọtụtụ ngwụcha: ọcha, isi awọ na ọla edo. Onye na-achịkwa ya agabigakwala nhazigharị, mana ọ ga - agbakwunye otu bọtịnụ ahụ ma tinye mgbakwunye aka.
N'ime ọhụrụ Apple TV anyị ga-ahụ ụlọ ahịa ngwa na ụlọ ahịa egwuregwu ndị ọzọ dakọtara na airplay. N'aka nke ọzọ, Apple TV ga - agbakwunye Siri ma bụrụ ụlọ nwere ọgụgụ isi nke ụlọ anyị. Ntọala ahụ nwere ike ijikọ na iPhone anyị, n'ụzọ dị ka, na mgbe anyị na-anọghị n'ụlọ, anyị nwere ike ịrịọ iPhone ka ịgbanwuo ọkụ ma ọ bụ na Apple TV ga-abụ ngwaọrụ na-ahụ maka izipụ iwu ahụ na nke kwekọrọ ngwa.
N'ikpeazụ, anyị ga-ahụ otu inweta nke Beats materializes afọ gara aga, azụmahịa nke furu Apple ijeri dollar atọ. Anyị nwere ọtụtụ ule na-eduga anyị na-eche na Apple nwere ya gụgharia music ngwa njikere nke ga-mpi ozugbo na ndị ọzọ nnukwu rivals dị ka Spotify. Ọnụ ndenye aha ahụ ga-abụ otu, n'agbanyeghị na ụlọ ọrụ ahụ gbalịrị igbutu ya na ọkara, mana enwebeghị ihe ịga nke ọma n'ihi ụdị ihe mgbochi iwu nke ụlọ ọrụ ndekọ.
N'adịghị ka iTunes Radio, Apple Music ga-eme ka anyị gee album ọ bụla zuru ezu ma ọ bụ kpọmkwem artist na anyị chọrọ. Enwere olile anya na mgbasawanye mba ụwa ga-adị ngwa ngwa karịa nke iTunes Radio, ebe ọ bụ na ọrụ ahụ erubeghị ókèala niile nke Apple na-arụ ọrụ nke ọma. A ga-etinye Apple Music n'ime iTunes, Apple TV, na iOS.
Apple si gụgharia telivishọn ọrụ
Anyị maara na Apple na-arụ ọrụ na ịmepụta nke ya gụgharia televishọn ọrụ, nke ga-enye ohere ikiri ihe dị n’ime ọwa redio telivishọn iri na abụọ na United States maka ọnụahịa ga-adị $ 30 ma ọ bụ $ 40 kwa ọnwa, dị ọnụ ala karịa igwe telivishọn dị na United States. Ọrụ a na-ewepụta atụmanya dị ukwuu, mana ọ dị nwute na Apple enwebeghị ike ịkwadebe ya maka WWDC 2015 a, yabụ ọ ga-ewe obere oge iji hụ ya.
Anyị enweghị obi abụọ na Apple ga-emeghe ogbako ya na Mọnde na-etu ọnụ maka ahịa Apple Watch. O yikarịrị ka vidio ga-eduzi isi okwu ahụ na-egosi obi ụtọ nke ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa Apple mepụtara gburugburu ụwa. Anyị na-atụ anya na Apple ga-ewebata nNtọala sọftụwia, metụtara HomeKit na nke ahụ, n'ezie, ihu ọhụụ ọhụụ pụtara ịhọrọ mgbe ị na-egosipụta oge ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ihe omume » Ihe anyị tụrụ anya na WWDC 2015